Incazelo Yokuhlupheka Nokuthi Luhlobo luni Lokuhlupheka Amakholwa KaNkulunkulu Okufanele Akuthwale | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Namuhla, abantu abaningi abanalo lolo lwazi. Bakholwa ukuthi ukuhlupheka akunamsebenzi, impilo yasemakhaya abo inezinkinga, ababona abathandwa bakaNkulunkulu, futhi izifiso zabo ziluvindi. Ukuhlupheka kwabanye abantu kufinyelela ephuzwini elithile, imicabango yabo iphenduka ukufa. Lolu akulona uthando lweqiniso lukaNkulunkulu; abantu abanjengalaba bangamagwala, abakwazi ukubekezela, babuthakathaka futhi kabanamandla! UNkulunkulu umagange ukuba umuntu amthande, kodwa ngale nkathi umuntu emthanda kakhulu, kungale nkathi nokuhlupheka komuntu kuzokwanda, futhi ngenkathi umuntu emthanda kakhulu, kanjalo nezilingo zakhe zizokwanda. Uma umthanda, konke ukuhlupheka kuzokwehlela—futhi uma ungamthandi, mhlawumbe yonke into izokuhambela kahle, futhi kuzoba nokuthula okukuzungezile. Uma uthanda uNkulunkulu, uzwa sengathi okuningi obhekene nako akunakwahlulwa, futhi ngoba isakhiwo sakho sincane kakhulu uzocwengwa; ngaphezu kwalokho, awukwazi ukwenelisa uNkulunkulu, futhi uyohlala uzwa sengathi intando kaNkulunkulu iphakeme kakhulu, umuntu ngeke akwazi ukuyifinyelela. Ngenxa yakho konke lokhu uzothola ukucwengwa—ngoba kunobuthakathaka obukhulu ngaphakathi kuwena, nokuningi okungakwazi ukwenelisa intando kaNkulunkulu, uzocwengwa ngaphakathi. Kodwa kufanele nibone ngokucacile ukuthi ukuhlanzwa kwenzeka kuphela ngokucwengwa. Ngenxa yalokhu, ngalezi zinsuku zokugcina kufanele nibe nobufakazi bukaNkulunkulu. Noma ngabe kungakanani ukuhlupheka kwenu, kufanele nize zifinyelele esiphethweni, ngisho nasemphefumulweni wenu wokugcina, nalapho kusafanele nithembeke kuNkulunkulu, futhi nibe semuseni kaNkulunkulu; yilona kuphela uNkulunkulu onothando, futhi yilobu kuphela ubufakazi obunamandla nobuphilayo.
Ungapheli amandla, ungabi buthakathaka, ngizokwambulela. Indlela eya embusweni ayilula kanjalo, akukho okulula kanjalo! Ufuna ukuthi izibusiso zize kalula, angithi? Namuhla wonke umuntu uzobhekana nezilingo ezinzima, kungenjalo inhliziyo enothando eninayo Ngami ngeke iqine ngokwengeziwe futhi ngeke nibe nothando lwangempela Lwami. Noma ngabe yizimo ezincane nje, wonke umuntu kufanele adlule kuzo, ukuthi nje ziyehlukana ngezinga elithile. Isimo singesinye sezibusiso Zami, bangaki abahlala beguqa phambi Kwami ukucela isibusiso Sami? Zingane eziyiziwula! Nihlala nizwa ukuthi amazwi ambalwa anenhlanhla abalwa njengezibusiso Zami, kodwa anizwa ukuthi ubunzima nabo bungesinye sezibusiso. Labo ababelana Nami ngobunzima bayokwabelana Nami futhi ngobumnandi. Lesi yisithembiso Sami nesibusiso Sami kini.
Kucashunwe “Isahluko 41” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ukuthanda uNkulunkulu kudinga ukuthi ufune intando kaNkulunkulu ezintweni zonke, futhi uhlole ujule ngaphakathi kuwe uma wehlelwa yinoma yini, uzama ukuqonda intando kaNkulunkulu, uzama ukubona ukuthi iyini intando kaNkulunkulu kulolu daba, ukuthi yini afisa uphumelele ukuyenza, nokuthi kufanele uyiqikelele kanjani intando Yakhe. Isibonelo: Kwenzeka okuthile okudinga ukuthi ubekezelele nobunzima, okufanele ngaleso sikhathi uqonde ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, nokuthi kufanele uyiqikelele kanjani intando Yakhe. Akumele uzenelise wena: Qala ngokuzibeka eceleni. Ayikho into edeleleke njengenyama. Kufanele uzame ukwanelisa uNkulunkulu, futhi kufanele wenze umsebenzi wakho. Ngemicabango enjalo, uNkulunkulu uzoletha ukukhanyiseleka okukhethekile kuwe kulolu daba, futhi inhliziyo yakho izoduduzeka. Noma kukhulu noma kuncane, uma okuthile kwenzeka kuwe, kufanele uqale ngokuzibeka eceleni ubuke inyama njengento ephansi kunazo zonke. Ngokunyukela ukwanelisa inyama, iya ngokukhululeka ukwenza umathanda; uma uyanelisa okwamanje, ngokulandelayo izofuna okuningi, futhi njengoba lokhu kuqhubeka, ugcina usuthanda okwenyama nakakhulu. Inyama ihlale inezifiso ezidlulele, ihlale icela ukuba uyigculise, nokuthi uyanelise ngaphakathi, noma ngezinto ozidlayo, lokho okugqokayo, noma uvuke ngolaka singekho isidingo, noma uvumele bonke ubuthakathaka kanye nobuvila bakho…. Uma uqhubeka nokugculisa inyama, ziya ngokuba nkulu izifiso zayo, futhi ziya ziba nkulu izinkanuko zenyama, kuze kufike lapho inyama yabantu isigcwele imibono ejule nakakhulu, iphinde ingalaleli uNkulunkulu, futhi izikhukhumeze, futhi ibe nokungabaza ngomsebenzi kaNkulunkulu. … Ngakho kufanele uhlubuke enyameni, futhi ungayivumi yonke into eyifunayo: “Umyeni (inkosikazi), izingane, amathuba, umshado, umndeni wami—konke akusho lutho! Enhliziyweni yami kukhona uNkulunkulu kuphela, futhi kufanele ngenze konke okusemandleni ami ukuze ngigculise uNkulunkulu, hhayi inyama.” Kufanele ube nalesi sinqumo. Uma uhlale unqume kanjalo, kuyothi lapho wenza iqiniso, futhi uzibeka eceleni, uyokwazi ukukwenza ngokuzikhandla okuncane nje.
Noma uzokwazi ukuzuza impilo phambi kukaNkulunkulu, nokuthi isiphetho sakho siyoba yini ekugcineni, kuncike ekutheni uhlubuka kanjani enyameni yakho. UNkulunkulu ukusindisile, futhi wakukhetha waphinda wakumisela phambili, kepha uma namuhla ungazimisele ukumanelisa, awuzimisele ukwenza iqiniso, awuzimisele ukuhlubuka enyameni yakho uqobo ngenhliziyo ethanda uNkulunkulu ngeqiniso, ekugcineni uyozibhidliza ngokwakho, ngaleyo ndlela uyobhekana nobuhlungu obugedlisa amazinyo. Uma uvumela inyama njalo, uSathane uzokudla akushwabadele ngaphakathi, futhi akushiye ungenampilo, noma ukuthintwa uMoya oNgcwele, luze lufike usuku lapho usumnyama ngokuphelele ngaphakathi. Uma uphila emnyameni, uyobe sewuthunjwe uSathane, ngeke usaba noNkulunkulu enhliziyweni yakho, futhi ngaleso sikhathi uyobuphika ubukhona bukaNkulunkulu futhi umshiye. Ngakho, uma ufisa ukuthanda uNkulunkulu, kufanele wenze konke okusemandleni akho ukhokhe inani lobuhlungu futhi ubekezelele ubunzima. Asikho isidingo sentshisekelo nobunzima bangaphandle obungabonwa, ukufunda kakhulu kanye nokuya le nale; kunalokho, kufanele ubeke eceleni izinto ezingaphakathi kuwe: imicabango edlulele, izinto eziyizidingo zakho ngokwakho, kanye nokuzibonelela, imibono kanye nokukhuthazwa kwakho. Isho njalo intando kaNkulunkulu.
UNkulunkulu ucela abantu ukuthi benze iqiniso ngokoqobo ikakhulukazi ukuze babhekane nezinto ezingaphakathi kubo, ukubhekana nemicabango yabo, nemibono engeyona eyenhliziyo kaNkulunkulu. UMoya oNgcwele uthinta abantu ezinhliziyweni zabo, futhi abakhanyisele aphinde abakhanyise. Ngakho ngemuva kwakho konke okwenzekayo kunempi: Njalo uma abantu benza iqiniso, noma benza uthando lukaNkulunkulu, kunempi enkulu, futhi nakuba konke kungabukeka kuhamba kahle enyameni yabo, ekujuleni kwezinhliziyo zabo impi yokuphila nokufa, eqinisweni izobe ihlangene phezulu empeleni—futhi ingemuva kwale mpi ethunqa uthuli kuphela, emuva kokucabanga okujule kakhulu lapho kunganqunywa khona mayelana nokunqoba noma ukwehlulwa. Umuntu akazi noma ahleke noma akhale yini. Ngenxa yokuthi ukukhuthazeka okuningi okungaphakathi kubantu akulungile, okunye ngenxa yokuthi omningi umsebenzi kaNkulunkulu awuvumelani nemibono yabo, uma abantu benza iqiniso, impi enkulu iliwa esithe. Sebelenzile leli qiniso esithe abantu babe sebekhale imvula yezinyembezi ngaphambi kokunquma ekugcineni ukwanelisa uNkulunkulu. Yingenxa yale mpi eyenza ukuthi abantu babhekane nokuzwa ubuhlungu nokucwengwa; lokhu ukuhlupheka kwangempela. Uma impi isiphezu kwakho, uma ukwazi ngempela ukuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, uzokwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Ukuhlupheka endleleni yokwenza iqiniso akunakho ukugwemeka; uma, lapho belenza iqiniso, yonke into ngaphakathi kubo ilungile, bebengeke badinge ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi bekungeke kube khona impi, futhi bebengeke bezwe ubuhlungu. Yingoba ziningi izinto ezikubantu ezingenakusetshenziswa nguNkulunkulu, futhi kuningi ukuhlubuka kwenyama, ngendlela yokuthi abantu badinga ukuthi bafunde isifundo sokuhlubuka enyameni kakhulu impela. Yilokhu uNkulunkulu akubiza ngokuzwa ubuhlungu acela umuntu ukuba adlule kukho kanye Naye.
Okwedlule：Ukukholwa KuNkulunkulu Akufanele Kube Ngokokufuna Ukuthula Nezibusiso Kuphela.
Okulandelayo：Abakholwa KuNkulunkulu Kufanele Balungiselele Isiphetho Sabo Ngezenzo Ezinhle Ezanele